साविक विजेता रुपन्देही फाइनलमा – Khel Dainik
साविक विजेता रुपन्देही फाइनलमा
बलका लागि भिड्दै रुपन्देही (हरियो) र नेपालगञ्जका खेलाडी ।
नेपालगञ्ज (खेलदैनिक) । साविक विजेता लाली रुपन्देही–११ जारी तेस्रो टुबोर्ग नेपालगञ्ज गोल्डकप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
फाइनल प्रवेश गर्ने क्रममा रुपन्देहीले बुधबार घरेलु टोली नेपालगञ्ज–११ लाई ४–२ गोल अन्तरले पराजित गर्यो । खेलमा रुपन्देहीले नेपालगञ्जलाई शुरुदेखि नै दबाबमा राखेको थियो । खेलको १५ मिनेटमा फोनाको गोलले रुपन्देहीले शुरुवाती अग्रता लिएको थियो । त्यस्तै रुपन्देहीका लागि खेलको २१ औं मिनेटमा स्याला र लगतै २२ औं मिनेटमा जोना ग्लोरीले तेस्रो गोल गर्न सफल भएका थिए ।
मध्यान्तरपछि नेपालगञ्ज आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भयो । दोस्रो हाफको शुरुवातमै नेपालगञ्जका कर्ण लिम्बुले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई खेलमा फर्काउने संकेत देखाए । यद्यपि त्यसको लगत्तै नेपालगञ्जका गोलरक्षक प्रितम खड्काले रुपन्देहीका ग्लोरीलाई फाउल गरेपछि पाहुना टोलीले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । त्यसलाई रुपन्देहीका जनक कार्कीले गोलमा परिणत गरे ।
खेलमा ४–१ गोलले पछि परेपछि नेपालगञ्ज अझ आक्रमण रुपमा प्रस्तुत भयो । नेपालको राष्ट्रिय टीमबाट खेलिसकेका कर्ण लिम्बुलाई खेलाएको नेपालगञ्जले केही राम्रा अवसरहरु सिर्जना गरेको गर्यो । यही बीचमा नेपालगञ्जका विभुषण केसीले सुन्दर गोल गर्दै खेललाई ४–२ को अन्तरमा ल्याएका थिए ।
त्यसपछि पनि नेपालगञ्जले गोल गर्ने अवसरहरु सिर्जना गरेपनि गोल हुन सकेन । खेलमा म्यान अफ म्याच रुपन्देहीका जोना ग्लोरी घोषित भए । उनलाई दुग्गड ग्रुपका जनरल म्यानेजर प्रदीप छाछेडले मोबाइल हस्तान्तरण गरे ।
नेपालगञ्जका प्रशिक्षक युवराज शाहीले तालमेल नहुँदा पराजित हुन पुगेको बताए । शाहीले भने “अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन हुन सकेन । पहिलाको भन्दा त हामीले राम्रो गयौं । तर, आगामी सिजनमा हामीले पूर्व तयारी गरेर टीम उतार्छौ । किपर र रक्षापंक्तिका खेलाडीका बीचमा तालमेल नहुँदा पहिलो गोल खायौ र त्यसपछि मनोबल अलिकति गिरेको पाए ।”
त्यस्तै रुपन्देहीका प्रशिक्षक पुकार गहतराजले आफूहरुले अवसरलाई गोलमा परिणत गर्न सक्दा विजयी भएको बताए । दोस्रो हाफमा तत्कालै गोल खादा टोली हतारिदा दोस्रो गोल खाएको गहतराजले बताए । उनले फाइनलमा अगाडिको लाइन सुधार गर्ने बताए । कप्तान सुजित गुरुंगले साविक विजेता भएकाले उपाधि जित्न प्रेसर बढेको बताए ।
प्रतियोगिता अन्तरगत बिहीबारको दोस्रो सेमिफाइनलमा सीएमजी संकटा क्लव र सुदूरपश्चिम–११ का बीचमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।
← मेयर कपमा वडा नं. ३ र वडा नं. ८ बिजयी आयोजकलाई हराउँदै थ्रीस्टार फाइनलमा →
महेन्द्र रत्नलाई भलिबल उपाधि जेष्ठ २३, २०७५
साफ यु–२० च्याम्पियनसिपमा नेपालका दुई रेफ्रीले पनि खेलाउने जेष्ठ २३, २०७५